डोल्पाली दलितको दर्दनाक जिन्दगी,जसलाई संविधानको मतलब नै छैन ! « जागरण मिडिया सेन्टर
Home » अन्य » डोल्पाली दलितको दर्दनाक जिन्दगी,जसलाई संविधानको मतलब नै छैन !
डोल्पाली दलितको दर्दनाक जिन्दगी,जसलाई संविधानको मतलब नै छैन !
२०७३ जेष्ठ ४, डोल्पा-जागरण मिडिया सेन्टर ।
डोल्पा भुगोलको हिसाबले नेपालको सबैभन्दा ठुलो जिल्ला हो । ३८ हजार जनसंख्या रहेको डोल्पामा करिब सांढे ५ हजारको हाराहारीमा दलित समुदायको बस्ती छ । त्रिपुराकोट, पहाडा, जुफाल, दुनै, सु“, कालिका लगायतका दर्जनौं गाबीसमा दलित बस्ती छ । र चेतनाको अभावका कारण डोल्पाका दलितहरु पिछडीएका छन् । डोल्पामा माथिल्लो जात भनिएकाहरुबाट आफुहरु अपमानित हुने गरेको स्थानीय मनोज सार्की बताउछन् ।
आर्थिक विपन्नताको कारण दलित समुदाय ओझेलमा छन । कसरी हुन्छ, उनीहरुलाई विहान बेलुका मुखमा माड लगाउनु छ । दिनभरी काम गरे मात्र उनीहरुको छार्क टर्छ नत्र भोकभोकै रात काट्नुपर्छ ।
जसोतसो पेट भर्दा र पोसिलो खाना खान नपाउँदा बालबालिकाहरु कुपोषणको शिकार भइरहेका छन् । डोल्पामा दलितको नाम बेचेर कमाउनेहरुको संख्या धेरै छ । तर सरकारी÷गैह«सरकारी संस्थाबाट आउने रकमले अरुको गोजी भर्ने गरेका छन् तर, दलित समुदायको नभएको नन्दलाल विकको अनुभव छ ।
आर्थिक विपन्नता र चेतानाको अभावको कारण दलित समुदायमा कम उमेरमा नै विवाह हुने गरेको छ ।
यता कर्णाली अञ्चलकै दलित समुदायको प्रतिनिधित्व गरेका दलीत संघ केन्द्रिय सदस्य राजीमान सार्की डोल्पाका सम्पुर्ण सरकारी तथा गैरसरकारी कार्यालयमा दलितका नाममा आउने रकम पारदर्शी हुन नसकेको बताउँछन् ।
झण्डै ५ हजारको हाराहारीमा डोल्पामा दलित बस्ती छ । र एक÷दुई बाहेक अन्य दत समुदायको हालत अत्यान्तै कमजोर छ । राज्यको कार्यक्रम समुदायसम्म पुग्न सकेको छैन, आइएनजीओको पैसा ठुलाबडाको हातमा पुगेको स्थानीय रामबहादुर नेपालीले बताए ।
संविधान कुन चराको नाम हो !
संविधान कुन चराको नाम हो, डोल्पाका दलित समुदायलाई थाहा छैन । उनीहरुलाई संविधान भनेको पनि थाहा छैन, अझ नया“ संविधानले दलित अधिकारका लागि के के सुनिश्चित गरेको छ ? उनीहरुलाई पत्तो छैन । र मतलब पनि नभएको जस्तो देखिन्छ । उनीहरुको एउटै चिन्ता, कसरी हुन्छ विहान, बेलुकाको छाक टार्नु मात्रै छ । सरकारले खाने, लाउने व्यवस्था गरे आफुहरुलाई केही नचाहिने उनीहरु बताउ“छन् । कलामी त एउटा उद्हारण मात्र हुन् । सबैको जवाफ यस्तै छ । कसरी विहान बेलुका हात जोड्नेभन्दा अरु चिन्ता छैन, उनीहरुलाई । त्यसो त डोल्पामा नगन्य मात्रमा अनाज उत्पादन हुन्छ । अन्न उत्पादन हु“दैन, रोजगारीको अवसर छैन । कहिलेकांही आउने अवसर पनि दलित समुदायसम्म पुग्दैन । दलित समुदायलाई नै लक्षित गरेर विभिन्न खालका आर्यआर्जन मुलुक कामका लागि तालिमहरु हुने गरे पनि उनीहरुले पाउ“दैन ।
घर चलाउन साहुँस“ग ऋण लिनु पर्ने बाध्यता उनीहरुस“ग छ । घर चलाउन र केटाकेटीलाई विद्यालय पठाउन उनीहरुस“ग ऋण लिनुको विकल्प छैन । कम्तीमा पनि सरकारले सहुलीयत दरमा ऋण उपलब्ध गराइदिए र आफ्ना छोराछोरीलाई छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरिदिए आफुहरुलाई निकै सहज हुने जीवन सार्की बताउ“छन् ।
र अधिकाँश डोल्पाका दलित समुदायलाई ऋणले गाँजेको छ, घरखर्च चलाउनका लागि ।
र राज्यले केही गर्देलाकी भन्ने आशामा डोल्पा दलीत समुदाय कुरेर बसेका छन् ।
पैसा अभावले विद्यालय छाड्दै
पैसा अभावका कारण दलित समुदायका विद्यार्थीहरुले बीचैमा पढाइ छाडेका छन्, स्थानीय जीवन सार्की भनाइ छ । आर्थिक अभावको कारण पढ्न जानु पर्ने समयमा बालबालिकाहरु अभिभाबकसँगै काम गर्न जान थालेका छन् ।
त्यसो त निकै आरोह–अवरोह पार गर्दै दलित समुदायबाट केही व्यक्तीहरु इन्जिनियर पनि भएका छन् । दलित समुदायमा जम्मा १० प्रतिशत मात्र दलित समुदायले पढ्ने अवसर पाएका दलीत संघ केन्द्रिय सदस्य, राजीमिन सार्की बताउँछन् ।
अस्थायी साधन प्रयोगका बिषमा जानकारी नहुँदा दलित समुदायमा धेरै बच्चा जन्मिने गरेका छन् । र आर्थिक अभावको कारण केटाकेटी अवस्थामा नै विवाह गरिदिने गरेका छन् । गरिबीका कारण पढन नपाइएको गुनासो छ, उनीहरुको । दुखकष्ट गरेर डोल्पाबाटै दलित समुदायमा छोरालाई ईन्जिनियर र छोरीलाई नर्स पढाईरहेका बाबु चन्द्रमान सार्कीको भनाई मा आर्थिकक अभावले निकै पीडा छ ।
सरकारले दलित समुदायको लागि बिभिन्न रोजगारीका अवसर तथा कम ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराईदिएको भए हुन्थ्यो भन्ने गुनासो गरे, चन्द्रमान सार्कीले ।
डोल्पाका दलित समुदायहरुले आयआर्जनका कार्यक्रमहरु संचालन गरी सिपमुलक कार्यक्रममा आफुहरुलाई सहयोग गर्न पनि उनीहरुले राज्यसँग अनुरोध गरेका छन् । बिपन्नता, अशिक्षाका कारण डोल्पाको हालत कस्तो छ ? सिउमल सार्कीको पीडाबाट प्रष्ट हुन्छ ।
– See more at: http://dalitonline.com/archives/9318#sthash.DYwjbMU0.lCUdyfzv.dpuf
By जागरण मिडिया सेन्टर in अन्य, दलित समाचार on May 17, 2016 .
← युवकलाई बालविवाह मुद्दा	पत्रकारको न्यूनतम परिश्रम लागू हुन्छः संचारमन्त्री राई →